Nkwadebe Data Talend: Mfe Dị Mfe, sachaa ma Kwadebe data CRM gị | Martech Zone
Batara na otu izu na Vegas nke na-ewe ndị ọzọ ụlọ ahịa ahịa. Ike gwụrụ gị, ezighachiri gị ozi email na ọrụ ndị ọzọ, ị nwere ụgbọ mmiri nke ọhụụ ọhụrụ kwesịrị ka a kwado gị wee banye n'ime usoro CRM gị. Na-ele anya na gigantic Excel nke aha, ị maara na ọ ga-ewe gị ụbọchị niile ịhazi data kọntaktị.
Iji aka abanye na nhicha data gị dị ka ikiri agba agba-na-agwụ ike ma na-egbu oge. Ọ bụ ebe ahụ ka ị na-edozi akwụkwọ ndenye ego gị, na-efere ma na-ehicha ụgbọala.
Otú ọ dị, data dị ọcha bụ akụkụ dị oke mkpa nke usoro ahịa na ịzụ ahịa. Ihe ozo bu mkpofu-in = mkpofu-apụ. Bubata na ikesa data adịghị njikere nwere ike ibute nsonaazụ na-akụda mmụọ na igbu oge na ego. Ọ dị mma, ọ bụrụ na enwere ngwa ọrụ dị mfe nke belata oge ọ ga - ehicha ma debe data gị site na elekere ruo nkeji?
Daalụ amamiihe data uche na Talend nwee mmetụta mgbu gị wee zaghachi na azịza ọhụrụ akpọrọ Nkwadebe data nke Talend. Ihe ohuru a, ngwa desktọọpụ n'efu na-enyere gị aka ịtụle, sachapụ ma jikọta data site na isi mmalite dị iche iche na nkeji na ngwa nhụjuanya, ngwaọrụ ndị na-eduzi gị na usoro ahụ. Ọ dị ka ịgagharị na ogige…
Nke ahụ ziri ezi, ị gụọ ebe a ụmụaka mbụ! Yabụ ịmalite atụmatụ n'ehihie basketball ahụ ma ọ bụ ịkpụcha mbọ aka n'ihi na ị na-achọ ịghaghachi HOURS n'ụbọchị gị. Ọ dị mma, enwere ike ịbụ m onye nwere oke nchekasị na ihu ahụ, mana na oke njọ, Talend Data Preparation, na-enye gị ohere ịkwụsị itinye oge bara uru nhicha na crunching data ma lekwasị anya na mbọ gị na ọrụ ndị ọzọ dị ka ịtụle ROI nke ihe omume ahụ niile ma nwee ike ịkekọrịta nghọta ahụ na ndị otu gị (na-enwetakwa gị isi ihe isi awọ-Daashi !!)
Nke a bụ anya na otu Nkwadebe data nke Talend nwere ike ime ka ọrụ gị dị mfe. Nke mbụ, ka anyị tụlee ụfọdụ usoro ị ga - eme mgbe ị na - agụ data maka nyocha iji chọpụta ma ọ bụrụ na ahịa ahụ na - adịbeghị anya nwere ROI dị mkpa. Na-amalite, data ọgbaghara gị nwere ike ịdị ntakịrị ihe dịka nke a:
Ugbu a, ị ga-enyocha data maka izi ezi; hụ na ụkpụrụ ejiri dị ire - ya bụ, Maazị v. Oriakụ ma ọ bụ Ms.; hụ na ozi ahụ zuru ezu na mpaghara niile; kpochapu ndenye abụọ; gbanwee ma dozie data ahụ; buru data n'ime Ahịa akpaaka nke sistemụ CRM ma mechaa mepụta ma depụta usoro nchekwa data nke na-agbakwunye usoro dị iche iche.
Ike agwụla gị? Abụ m… na anya m na-enwu gbaa site n’ile anya na otu mpempe akwụkwọ maka elekere atọ gara aga….
Ewebata Talend Data Nkwadebe
Ugbu a, iji Talend Data Nkwadebe, ị nwere ike ịnweta, sachaa ma kwadebe data n'ụzọ dị mfe, kensinammuo. Nke mbu, mgbe itinyere ngwa oru a, o na - akpali gi ka igwa gi okwu iji bulie faịlụ Excel ma obu uzo ozo di iche. Mgbe ahụ ị họrọ otu mpempe akwụkwọ ahụ na naanị ole na ole ị nwere ike ịsacha, dozie, mpaghara zuru oke ma nyochaa data site na mpaghara, aha ọrụ, wdg iji nweta nghọta ka mma banyere ogo ọhụụ ọhụrụ gị. Akwụkwọ mpịakọta gị dị mkpirikpi ugbu a dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike mfe mbubata ọcha data n'ime Tableau iji mee ka ndị ọzọ omume ịrụ ọbụna mma. Ọzọkwa, dịka ị na-ahọta ma hichaa mpaghara dị iche iche na mpempe akwụkwọ gị, Nkwado data Talend na-echekwa ndekọ nke nhọrọ ndị ahụ. Nhọrọ ị mere wee bụrụ 'Ntụziaka' nke ị nwere ike idowe na faịlụ maka ederede n'ọdịnihu iji zere ịmegharị. Yabụ oge izizi iji dataset rụọ ọrụ, ị na-echekwa oge. Mana mgbe data nwetara ume (yabụ na ihe ngosi nke na-esote afọ), ọ bụghị naanị na ị belata oge, mana ị ga-ewepụ ọrụ ọ bụla achọrọ kpamkpam! (Ugbu a ị nwere oge ụfọdụ n'efu n'oge gị maka opekata mpe ezumike kọfị ma ọ bụ gafere ogige ahụ n'oge nri ehihie).
Ọ bụghị naanị maka ndị ahịa
Nkwadebe data nke Talend dịkwa mma maka ndị ọrụ mmadụ na uru ndị nchịkwa, ndị azụmaahịa na ndị na-enyocha ego, ma ọ bụ ọrụ ọ bụla na-etinye ụyọkọ oge na-arụ ọrụ na data ma ọ bụ na-agbaji ntutu ha na mpempe akwụkwọ. Ya mere, ma ị na-ehicha tradeshow-eduga, ịgbakọ na isi nke a nwere nnweta, nyochaa azụmahịa ma ọ bụ sizing ahụ kacha mma eze, ọhụụ, ndụ mkpuchi na mgbanwe emefu atụmatụ maka ụlọ ọrụ gị-now ohere nghọta bụ nnọọ a click pụọ!
Na-egbuke egbuke ma dị mma na ihe ị na - eme — yabụ gịnị kpatara ị ga - eji oge na - agbagha data vs. ịkọrọ ndị otu gị ihe gị? Yabụ ugbu a, n’ezie naanị ajụjụ ị kwesịrị ịjụ onwe gị bụ: kedụ ebe m ga-esi nweta ya? !!!
Wepu ihe omuma gi nke Talend Data Nkwadebe Taa!
Tags: CRMdataịdị ọcha datankwadebe datanhazi datatalendnkwadebe data nkwadebe